IMasuria ngaseChibini - I-Airbnb
Le ndlu incinci yabucala eyenziwe ngamaplanga enendawo yokuziphakela ejonge echibini ukusuka kwipatio enkulu kunye nebalcony ngaphezulu. I-Cottage ibandakanya igumbi lokulala elineebhedi ezimbini, igumbi lokuhlala elineebhedi ezimbini zesofa, igumbi lokuhlambela elinesinki kunye neshawa, ikhitshi elinefriji, isitovu sombane kunye nazo zonke izinto ezisisiseko eziyimfuneko ekuphekeni. Kumaqela amakhulu kukho igumbi elongezelelweyo elingaphezulu elifikelelekayo ukusuka ngaphandle kunye negumbi lokuhlambela elineshaver, ibhedi yesofa kunye nebhedi enye, ibalcony enokutshona kwelanga okumangalisayo kunye nokubonwa kwechibi. Kwipatio une-grill yokuphumla ngokuhlwa kwaye elunxwemeni lwechibi kukho i-gazebo enezibane zezibane, itafile eneebhentshi kunye nomgodi womlilo wokucula ingoma ngokuhlwa. Kwipropathi sinamanzi kunye nezixhobo zemidlalo zendlela zokurenta / iikayak, isikhephe esikrwada, iibhayisekile zeentaba kunye nedolophu / .Kanye ecaleni kukho iponti encinci eneentyantyambo kunye namaqhekeza.
4.90 · Izimvo eziyi-67
Mna okanye omnye umntu ukhona ngalo lonke ixesha nasebusuku. Ndifumaneka ngomnxeba okanye undwendwe lungeza emnyango xa kukho unxunguphalo okanye nawuphi na omnye umcimbi.